Egwuregwu 7 yiri n'etiti Anyị maka gam akporo | Gam akporosis
Ignacio Sala | 01/07/2021 22:00 | Egwuregwu gam akporo
Ọ bụrụ na ị chere na oge eruola ịgbanwe egwuregwu ahụ, mana ị na-amasị egwuregwu egwuregwu mmepụ mmekọrịta, na Storelọ Ahịa Play, anyị nwere dị iche iche egwuregwu yiri n'etiti US, egwuregwu na-enye anyị ntọala ọhụrụ, ihe odide ọhụrụ na karịa ihe niile, ụda dị iche iche.
Isi ihe dị iche iche nke ụdị egwuregwu a bụ na ha nwere ọtụtụ egwuregwu, ebe ọ na-enye anyị ohere soro ndi enyi anyi chịa ochi. Egwuregwu niile m na-egosi gị n'okpuru, na-enye anyị ọrụ a ka anyị wee hapụ ọrụ ọ bụla anyị nwere na anyị n'etiti US.
1 Na-amata anyị
2 Na-enyo enyo: Mysterious Mansion
3 Ragba mgba.io
4 Obodo Salem
5 Mmadụ atọ
7 Na-ekpuchi ^^
Muder anyị fọrọ nke nta ka oyiri dị n'etiti US, mana n'agbanyeghị nke ahụ, ihe karịrị 10 nde ndị ọrụ ebudatara ya ma nwee akara ngosi 4,5 kpakpando n'ime 5 ga-ekwe omume mgbe ihe karịrị 800.000 nyochaa, ọkwa dị elu karịa egwuregwu mbụ nke akara ya bụ kpakpando 3,5.
Aha a na - enyere anyị aka igwu egwu na ntanetị na egwuregwu site na 6 ruo 20 egwuregwu. Ndị na-egwu egwu ga-ejigide ọnọdụ atọ aha a na-enye anyị mgbe anyị na-agbachitere otu ma ọ bụ karịa ndị na-egbu ọchụ. N'adịghị ka n'etiti US, Muder anyị na-enye ọrụ 4 dị iche iche ndị egwuregwu nwere ike igwu:
Ogbu mmadu. Ogbu ọchụ ahụ, dị ka aha ya na-egosi, ga-ahụ maka ime ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ gbuo na-enweghị onye achọpụtara na enyemaka nke ndị so ya.
Onye na-achọpụta ihe. Have ga-achịkọta akara ngosi niile dị mkpa iji chọpụta onye ogbu ọchụ ahụ bụ.
Zuru ezu. Onye na-eme ihe a ga-ahụ maka izobe na ihicha egwu na ozu nke onye gburu ọchụ hapụrụ ka a ghara ịchọpụta ya.
Onye ọrụ. Na-ahụ maka ịrụzi ụgbọ mmiri ahụ na ịchọta onye gburu ọchụ ahụ.
Egwuregwu ndị ahụ nwere ike ịbụ ọhaneze ma ọ bụ nkeonwe na ịntanetị. Muder anyị dị maka gị budata n'efu, chọrọ Android 4.1 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, na-egosiputa mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa nke na-enye anyị ohere ịhazi ọdịdị nke agwa anyị.
Na-enyo enyo: Mysterious Mansion
Omume na Suspect na-ewere ọnọdụ na nnukwu ụlọ, ebe a ndị egwuregwu 10 kacha Ha ga-edozi ihe omimi nke igbu ọchụ, na-arụ ọrụ nyocha iji chọpụta onye gburu ọchụ, ma lezie anya na ọ nọ n'òtù ahụ na ọ ga-eme ihe niile enwere ike ịchọta.
Ozugbo okirikiri ọ bụla gwụchara, ntuli aka na-amalite, ebe ndị egwuregwu ga-akọwa arụmụka ha iji nwaa ịchọpụta onye ha kwenyere na ọ bụ ogbu ọchụ ahụ site na olu nkata awa site na ngwa.
Na-enyo enyo: Mysterious Mansion dị maka gị budata n'efu, chọrọ Android 4.4 ma jikọta ịzụrụ ihe n'ime ngwa. Na ihe karịrị 400.000 reviews, ọ nwere nkezi fim nke 4,3 kpakpando nke 5 ga-ekwe omume.
Developer: Studmụ anụmanụ Anụmanụ
Bretrayal.io bụ egwuregwu egwuregwu ọtụtụ ebe anyị ga-edozi nke bụ onye sabo nke ndị ọrụ ahụ. Na aha a ha nwere ike igwu egwu site na 5 ruo 11 ndị egwuregwu. Aha a nwere ihe ngosi abụọ nke egwuregwu a na-eme: oghere na ebe obibi. Dị ka ọ dị n'etiti US anyị nwere ike ịhazi ọdịdị nke agwa anyị site n'ọtụtụ ọnụọgụ nke ngwa na uwe.
Bretrayal.io bụ dị n'efu ibudata site na Storelọ Ahịa Play, chọrọ Android 4.4 ma ọ bụ karịa ma gụnye ịzụrụ ihe n'ime ngwa. Anyị nwekwara mbipute dị maka ihe nchọgharị, nke na-enye anyị ohere igwu aha a na ndị enyi ndị ọzọ ọbụlagodi na ha enweghị gam akporo ama ma ọ bụ chọọ ime ya nke ọma karịa na kọmputa.
Developer: Mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta, Inc.
N'adịghị ka ndị ọzọ ndị ọzọ na Otu US anyị na-egosi gị n'isiokwu a, Town of Salem bụ onye amaala na ụlọ ahịa Play, bụrụ otu n'ime egwuregwu kacha ochie yana ihe ọkpụkpọ karịrị 8 nde.
Ọnụ ọgụgụ kachasị nke ndị egwuregwu Onye nwere ike igwu egwu Town of Salem bụ 15, yabụ ndị otu enyi gị buru oke ibu ma ị nweghị ike igwu egwu mgbe niile n'etiti US niile, ị kwesịrị ịnwale aha a.
Omume na Town of Salem na-eme na obere obodo bụ ọrụ anyị iji kpuchido ndị agbata obi gị niile (ndị egwuregwu) ọbụlagodi na anyị amaghị ihe omimi zoro ezo nke a nwere ike ịchọta n'azụ ha (na-anọpụ iche, ìgwè mmadụ, Oghere Usoro ahụ na-egbu egbu ma ọ bụ onye na-ere ọkụ).
Obodo nke Salem, dị maka gị budata n'efu, chọrọ Android 4.4 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa. Otu n’ime ihe adịghị mma banyere isiokwu a bụ na ọ bụ naanị n’asụsụ Bekee.
Obodo nke Salem - The Coven
Developer: Egwuregwu efu
A na-ahụ ihe ọzọ yiri nnọọ n'etiti US na Triple Agent, egwuregwu juputara na hoaxes, betrayals, amata zoro ezo na nwepu mmadu. Ọ na-ewe otu ngwaọrụ ka ihe ruru 9 Player nwere ike ịnụ ụtọ aha a.
Egwuregwu ndị ahụ nwere oge kachasị nke 10 nkeji, ebe anyị nwere ike ịbụ onye ọrụ ma ọ bụ mmadụ abụọ na-ahụ maka nje ahụ. Ọ bụrụ na anyị ga-abụ Agende nke abụọ, anyị kwesịrị kwee obi abụọ n'etiti ndị egwuregwu ndị ọzọ ekpughe ihe omuma nke na enyere anyi aka ikpuchi njirimara anyi. Na njedebe egwuregwu ahụ, onye ọ bụla n'ime ndị egwuregwu ahụ ga-eme ntuli aka iji chọpụta onye mmadụ abụọ ahụ bụ.
Mmadụ atọ dị maka gị budata n'efu, chọrọ Android 4.1 ma ọ bụ karịa, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
Developer: Tọrọ ụtọ Rook
Wolvesville na-eme na obodo dị iche iche, obodo nta ndị anyị nwere chụpụ ndị mwakpo / ike nke ihe ọjọọ, na aha nke jikọtara lanarị, ọgụ na aghụghọ na akụkụ hà. Egwuregwu egwuregwu a na-enye ohere kachasị elu nke ndị egwuregwu 16 kwa egwuregwu.
Aha a nwere ihe karịrị nde 10 nbudata, nkezi nke 4,4 kpakpando n'ime 5 ga-ekwe omume dabere na ihe karịrị 300.000 ratings. Chọrọ gam akporo 4.1 ma ọ bụ karịa, ọ dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
Wolvesville - Werewolf n'ịntanetị
Na a njedebe kachasị nke ndị egwuregwu 20, anyị na-ahụ Undercover ^^, a dị iche iche na aha ihe Otu US na-enye anyị. Nkpuchi ekpuchi ^^ dị mma iji soro ndị enyi ma ọ bụ ndị ezinụlọ gị kpọọ ebe ọ bụ na anyị ga-eburu n'uche mmegharị ọ bụla nke ndị egwuregwu ọ bụla iji chọpụta onye Maazị White bụ. N'ime aha a, e nwere ụdị egwuregwu atọ: Citizmụ amaala, Ndị uwe ojii na Maazị White.
Kedu ka mkpuchi nzuzo si arụ ọrụ? Nyefee ndị enyi gị mobile ka onye ọkpụkpọ ọ bụla nwee ike ịhọrọ aha ha ma nweta okwu nzuzo. Citizmụ amaala niile ga-enweta otu okwu ahụ, Onye na-ekpu mkpuchi ga-enweta okwu dịtụ iche, ma Maazị White ga-anata akara ^^.
N'ikpeazụ, onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-akọwa okwu ya, ebe Maazi White ga-emezigharị. N'akụkụ ịtụ vootu, onye ọkpụkpọ nke nwere okwu dị iche na nke ọtụtụ karịa ga-abụ onye a na-enyo enyo. Ngwa ahụ ga-ekpughere anyị, ozugbo egwuregwu ahụ kwụsịrị, onye bu mr white. Y’oburu na anyi enweela ihe ịga nke ọma, anyi ga-enwe mmeri na egwuregwu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » 7 egwuregwu yiri n'etiti Anyị maka gam akporo
Amaghị ihe ị ga-eme na igwe ochie gị? Tozọ iji nye ha ndụ nke abụọ